“बाबुराम-विप्लव र म एकभए कायापलट हुन्छ, देशले ठूलो फड्को मार्छ”: प्रचण्ड,होला त यो संभव?,हेर्नुहोस। – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
“बाबुराम-विप्लव र म एकभए कायापलट हुन्छ, देशले ठूलो फड्को मार्छ”: प्रचण्ड,होला त यो संभव?,हेर्नुहोस।
काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्र`चण्डले डा. बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य कि`रण र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई मूलधारमै फर्किन आ`ग्रह गरेका छन्। तत्का`लीन माओवादी छाडेर हिँडेका प्रदेश २ का नेताहरुलाई धुम्बाराहीमा आयो`जित कार्यक्रममा नेकपामा प्र`वेश गराउँदै प्र`चण्डले यस्तो बताएका हुन्।
‘कम्युनिष्टहरू एकै पार्टीमा बसेर ब`हस गर्ने गर्छन्। छलफल सं`घर्ष रुपान्तर र नयाँपन पार्टीमा चलिरहन्छ’, उनले भने, ‘चीनका नेताले भन्थे, तिमी बुर्जुवाहरु टुक्रा टुक्रा हुँदा पनि हामी कम्युनिष्ट एकै छौँ। नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दो`लन विभा`जन भएर हामीले दुःख पाएका हौँ।’
अध्यक्ष दाहालले कम्युनिष्टहरू विभा`जित भएकैले सम`स्या भएको उल्लेख गरे। ‘हामी विभा`जित भएकैले सम`स्या भयो’, उनले भने, ‘कम्युनिष्ट फुटेकैले कांग्रेसले सरकार चलायो। सजिलै दुईतिहाइ आइहाल्छ भनेर सोच्नु मनो`गत थियो, ए`कतामा त्यति ठूलो ता`गत हुने रहेछ। कम्युनिष्ट ए`कताको ता`गत हामीले विश्‍वलाई देखाइसकेका छौं।’
अध्यक्ष दाहालले ए`कतापछि अन्य समूह पनि नेकपामा आइरहेको बताए। उनले फु`टेर गएका नेताहरुलाई पनि मूलधारमा फर्किन आ`ह्वान गरेका छन्। ‘अरु जनमत पनि हामीसँग जोडिन आएको छ’, उनले भने, ‘अब किरणजीले, बाबुरामले र विप्लवजीले पनि मूलधा`रातिरै फर्किनै पर्छ। यो नै जनतको हि`तमा हुन्छ। वि`वादहरु हामी सँगै बसेर मिलाउँला।’
ईश्वर पोखरेलका स`म्धीलाईले लिए स`पथ
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समितिको स`दस्यको रुपमा डा. उपेन्द्र कोइरालाले स`पथ लिएका छन् । बैंकको सञ्चालक समितिको अ`ध्यक्षता गर्दै आएका सञ्चालक धनीराम शर्मास`मक्ष कोइरालाले स`पथ लिएका हुन् ।
बैंक स्रो`तका अनुसार अब बस्ने सञ्चालक समिति बैठकले कोइरालालाई अध्यक्ष च`यन गर्नेछ । उपप्रधानमन्त्री तथा र,क्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी रहेका कोइरालालाई नियु`क्ति दिएको भन्दै सार्वजनिक आ`लोचना भएपछि उनी बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष च`यन भएका छैनन् ।
तर उनले आफूलाई अध्यक्ष च`यन नगरे सञ्चालक समिति सदस्य पनि नबस्ने भन्दै घुर्क्या`एका बैंक स्रो`त बताउँछ । उनले स`पथ लिएपछि अब अध्यक्ष बन्ने प`क्का भएको स्रोतको भनाइ छ । लिडर पोस्ट बाट
Previous राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको सहयोगमा नेपालीले बनाए इन्टरनेट बिना भिडियो हेर्न मिल्ने ‘ओकेट्युव’, कसरी प्रयोग गर्ने?
Next पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवले डा. गोबिन्द केसीलाई अस्पतालमा भेटी यसो भने,पूरा पढ्नुहोस।